चस्मा लगाएर संसदमा छिर्न नपाइने ! कलम, डायरी र औषधि पनि निषेधित – जुगल टाईम्स
चस्मा लगाएर संसदमा छिर्न नपाइने ! कलम, डायरी र औषधि पनि निषेधित
Posted on २५ बैशाख २०७७, बिहीबार १३:२३ Author जुगल टाईम्स	Comment(0)
कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच सुरु हुन लागेको बजेट अधिवेशनमा चस्मा लगाएर जान नपाइने भएको छ । संसद सचिवालयले कलम, डायरी र औषधिसमेत संसदभित्र लैजान निषेध गरेको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरानाबाट जोगिनका लागि चस्मा अनिवार्य लगाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, शुक्रबार बेलुका ४ बजेदेखि सुरु हुने संसद अधिवेशनमा भने चश्मालाई निषेधित वस्तुको सूचीमा राखिएको छ ।
विशिष्ट व्यक्ति, संवैधानिक अंगका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र पत्रकार तथा दर्शकदीर्घामा लागि छुट्टाछुट्टै प्रवेशद्वार छन् । त्यहाँ निषेधित वस्तुहरुको सूची टाँस गरिएको छ ।
सूचीमा कलम, डायरी, झोला, चस्मा, चाबी, सिक्का, चार्जर, छाता, लठ्ठीसमेत साथमा राख्न नपाइने उल्लेख छ ।
पत्रकारहरुले डायरी र कलम नै बोक्न नपाउने अचम्मको नियम संसद सचिवालयले बनाएको छ । चस्मा र औषधिसमेत निषेध गरिएकाले दृष्टि कमजोर भएका र नियमित औषधि खानेहरु पनि मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।
संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले भने असावधानीबस त्यस्तो हुन गएको र सूचीलाई सच्याउने बताए । सच्चिएर कस्तो सूची आउने हो, हेर्न बाँकी छ ।
घाँटीमा मासु अड्किँदा ज्यान गयो
Posted on ७ बैशाख २०७७, आईतवार ११:४८ Author जुगल टाईम्स
सल्यानमा घाँटीमा मासु अड्किँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । जिल्लाको शारदा नगरपालिका १३ का ६९ वर्षीय देवीलाल कामीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । सल्यानचौरस्थित स्थानीयको घरमा गएर मासु खाने क्रममा घाँटीमै अड्किएको थियो । उपचारका लागि ल्याइएपनि जिल्ला अस्पताल सल्यानले उनलाई मृत घोषणा गरेको हो । शवको पोष्टमार्टम भइरहेको प्रहरीले […]
Posted on २४ चैत्र २०७६, सोमबार २१:३५ Author जुगल टाईम्स
राष्ट्र बैंकको गर्भरनरमा महा प्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो । गभर्नर छनौट सिफारिस समितिले राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसहित बहालवाला डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र पूर्व सचिव राजन खनालको नाम सिफारिश गरेको थियो । यसअघिका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको […]
काठमाडौं र तनहुँमा गरी चार जना मृत अवस्थामा फेला
Posted on १४ बैशाख २०७७, आईतवार १२:२६ Author जुगल टाईम्स
काठमाडौं महानगरपालिका–१८ नरदेवी डेरा गरी बस्ने सोही महानगरपालिका–२२ टेवहाल घर भएकी ९४ वर्षीया कान्छी बज्राचार्य शनिबार दिउँसो आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी छन् । यसैगरी काठमाडौं, दक्षिणकाली नगरपालिका–४ बाराही टोल बस्ने मोरङ केराबारी घर भएका २२ वर्षीय अर्शित मगर आफ्नै कोठामा शनिबार राति मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । तनहुँ, ऋसिङ गाउँपालिका–३ मास्तीघाटस्थित सेती […]
आन्ध्र प्रदेश : रासायनिक उद्योगमा ग्यास लिक हुँदा कम्तीमा ९ जनाको ज्यान गयो